दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १३ गते सोमबार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर ३० - Sutra TV Sutra TV
मेष : आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंलाई संकटको समयमा मद्दत गर्ने आफन्तलाई आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईंको सानो इशाराले उनीहरूको उत्साह बढाउनेछ। कृतज्ञताले जीवनको सुंदरता बढाउँछ र कृतघ्नताले यसलाई कलंक लगाउनेछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। आज तपाईंले काममा साँच्चै नै केही उत्कृष्ट कार्य गर्न सक्नु हुनेछ। यात्राले तपाईंलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भेट्न सघाउँछ। नियमित वैवाहिक जीवनमा, यस दिनले स्वादिष्ट मिठाईको रूपमा कार्य गर्नेछ।
वृष : सांझ चलचित्र थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनावमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। आकाश चम्किलो देखिन्छ, फूलहरू अझै रंगीन जस्तो लाग्छ, र सबै नै तपाईं वरिपरि प्रकाशित हुनेछ, किनभने तपाईंलाई प्रेम भएको छ, तपाईंको लगातार मेहनतलाई आज साँच्चै नै राम्रो लाभ भएको छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। यो आफ्ना जोडीसित तपाईंको रमाइलो दिन हुनेछ।
मिथुन : भीड बसमा यात्रा गर्दा रक्तचापका विरामीहरुले उनीहरूको स्वास्थ्य बारे अतिरिक्त ध्यान दिनुपर्छ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। रिस छोटो पागलपन हो र यसले तपाईंलाई… गराउन सक्छ भनेर तपाईंले जान्नु पर्ने समय हो आज प्रेममा आफ्नो विवेक शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले धेरै समय लाभ हुने परियोजनाहरुमा काम गर्नुपर्छ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आज आफ्नो जीवन साथीले भर्खरै भएका नराम्रा घटनाहरूको बिर्सेर तपाईंलाई सबै राम्रो भावना प्रकट गरेर देखाउनेछन्।
कर्कट : परिवारको चिकित्सा खर्चमा भएको वृद्धि हटाउन सकिंदैन। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। तपाईंले आफ्नो हारबाट केही सिक्नुपर्छ, किनकि आज प्रस्ताव गर्नाले आफ्नो प्रिय झर्किन सक्छ। आज काममा सबैले इमानदारीसाथ तपाईंको कुरा सुन्नेछन्। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको दैनिक आवश्यकता पूरा नगर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईंको मुड बिग्रिनेछ।
सिंह : तपाईंको ऊर्जा स्तर उँचो हुनेछ। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। कार्यालयको काममा धेरै संलग्न भएकोले आफ्नो जोडीरपत्नीसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुनेछ। तपाईंको प्रिय रोमान्टिक मुडमा हुनेछन्। आज, तपाईंलाई आफ्नो मालिक सधैं तपाईंसँग किन यति अशिष्ट छ भन्ने सत्य थाहा हुनेछ। यसले तपाईंलाई साँच्चै नै राम्रो लाग्नेछ। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
कन्या : केही बिघ्नहरूको सामना गर्नु पर्न सक्छ। मन नमार्नुहोस् तर चाहेको परिणाम प्राप्त गर्न कठिन काम गर्नुहोस्। यी बिघ्न बाधाहरूले अझै उत्थान गराउन सकुन। आफन्तहरूले पनि संकटको समयमा मद्दत गर्नेछन्। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। मायामा डुब्नु आज तपाईंको लागि पाप हुन सक्छ, सावधान रहनुहोस्। आज तपाईंले गरेका सबै कामका मेहनतको भुक्तानी हुनेछ। तपाईंको सञ्चार कौशल प्रभावशाली हुनेछ। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले राम्रो बातचीत गर्नु चाहिं आवश्यक छ।
तुला : आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनावमुक्त र खुसी राख्नेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस्, मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने, तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। आज काममा सबैले तपाईंलाई प्रेम र समर्थन गर्नेछन्। घरमा संस्कार, हवन, शुभ समारोह गरिनेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
वृश्चिक : आफ्नो जोडीको सुंदर मुडले तपाईंको दिन रोशन हुन सक्छ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ, तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। कल्पनामा पछि नपर्नुहोस् र धेरै व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूसँग केही समय बाँट्नुहोस्, यसले तपाईंलाई धेरै राम्रो गर्नेछ। तपाईंका आँखा आफ्नो प्रेमीको अँध्यारो रातलाई प्रकाश गर्न सक्ने उज्ज्वल छन्। सेवकहरू, सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने, त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
धनु : तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्न छोराछोरीलाई सहयोग गर्ने उचित समय। लामो समयसम्म एक्लो काटेको समयको अन्त भयो, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी पाउने समय आएको छ। आज गरेको लगानी आकर्षक हुनेछ तर तपाईंले साझेदारहरूबाट केही विरोध हुन सक्छ। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
मकर : तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन्, पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नी सपनाकी राजकुमारी भेटेकोले तपाईंका आँखा आनन्दले प्रकाशित भए र मुटुको धडकन पनि छिटो भयो। व्यापारका नयाँ विचारहरूको लागि सकारात्मक र चाँडो प्रतिक्रिया गर्नुहोस्। तिनीहरू तपाईंको पक्षमा हुनेछन्। तपाईंले मेहनत गरेर वास्तविकतामा परिवर्तित गर्नु आवश्यक छ, जुन तपाईंको व्यापारमा चासो राख्न महत्वपूर्ण छ। काममा आफ्नो रुचि बनाइराख्न आफुलाई शान्त राख्नुहोस्। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक-अर्कामा पग्लेका छन्।
कुम्भ : आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुहोस्। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, तपाईंको स्थिति कमान गर्ने हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईंलाई एकजना आफन्तले आश्चर्य दिन सक्छ, तर यसले तपाईंको योजनामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।
मीन : तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। परिवार सजिलै चल्ने देखिन्छ र तपाईंले आफ्नो योजनामा पूर्ण सहयोगको आशा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले प्रेम सम्बन्धमा गलत बुझ्ने सम्भावना छ। कसैको व्यावसायिक प्रगति हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। कुनै बाह्य पक्षले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच मतभेद सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले यसलाई समाधान गर्नु हुनेछ।